के गदै छन् म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका पुराना स्ववियू सभापति ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार के गदै छन् म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका पुराना स्ववियू सभापति ?
के गदै छन् म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका पुराना स्ववियू सभापति ?
२०७३, १७ फाल्गुन मंगलवार १८:१९
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा बुधबार स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचन हुदैछ । जिल्लाकै इतिहास बोकेको क्याम्पसको निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न जिल्लाका क्रियासिल राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता, विद्यार्थी संगठन सक्रिय छन् । मिनि सांसदको निर्वाचनका रुपमा हेरिने स्ववियू निर्वाचनका विगतमा निर्वाचित सभापतिहरु के गदैंछन भन्ने बहस समेत बेलाबेलामा चलिरहन्छ ।
स्ववियूका उम्मेदवारहरुले समेत विद्यार्थीलाई भोग मागेर आफ्ना कार्यकाल पुरा गरेपनि भोट माग्दा बाँड्ने सपनाहरुलाई पुरा नगर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमै आलोचना समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । लामो समयको अन्तराल पछि हुन लागेको स्ववियू निर्वाचनमा मैदानमा उत्रिएका विद्यार्थीले समेत सञ्चार माध्यम र विद्यार्थीलाई समेत विद्यार्थी राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियू निर्वाचनलाई नजिकबाट हेर्दा २०४९ सालमा हिमलाल गर्बुजाले सभापतिमा जितेका थिए ।
२०५३ साल फागुन २० गते थम बहादुर गिरीको प्यानलले स्ववियू निर्वाचनका विजय प्राप्त गरेको थियो । गर्बुजा र गिरी हाल राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । त्यस्तै २०५१ सालमा दुर्गा कार्कीले सभापतिमा विजय प्राप्त गदैं पहिलो महिला स्ववियू सभापति बनेकी थिईन् । गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध रहेकी कार्की समेत राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । २०५५ सालमा भएको निर्वाचनमा सभापतिमा विजय भएका क्षेत्र बहादुर घिमिरे विप्लवले आफ्नो विजयको घोषणा समेत भूमिगत रुपमै सुने ।
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको आसपासको जंगलमा सभापतिमा विजय भएको खवर सुनेर भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भएका विप्लव माओवादीको जनयूद्धमा १० बर्षसम्म सेनाको कमाण्डरको रुपमा विताए । प्रचण्ड माओवादी हुदै हाल विप्लव माओवादी सक्रिय रहेका उनी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य समेत हुन । २०५७ सालमा सभापतिमा विजय भएका खुम बहादुर बानियाँ नेकपा एमालेको पुर्व जिल्ला सचिव हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीको पदाधिकारीमा प्रवेश गरेका बानियाँ अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त बानियाँले स्नातक तहको शिक्षालाई समेत पुरा गरेका थिए ।
त्यस्तै २०६० सालमा सभापतिमा आफ्नो नाम समावेश गरेका प्रेम बहादुर कार्की विर्खची विद्यार्थी राजनीतिका सक्रिय नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
तार्किक बहस, यूवालाई आर्कषित गर्ने क्षमताका धनी कार्की नेकपा एमालेको सचिवालय सदस्य तथा मोर्चा विभाग प्रमुख समेत हुन् । राजनीतिसंगै जिल्लाको सहकारीको नेतृत्व गदैं सहकारी संघको अध्यक्ष समेत रहेका कार्की इन्टरनेट ब्यवसायमा समेत सक्रिय छन् । नेकपा एमालेको भावी नेतृत्वका रुपमा समेत हेरिएका कार्की जिल्ला अधिवेशनबाट पदाधिकारीमा लड्ने तयारीमा समेत छन् । २०६२ सुालमा सभापतिमा विजय भएका प्रेम सिके राजनीतिमा छैनन् ।
यूवाहरुको लोकप्रिय मतले सभापतिमा विजय भएका सिके रोजगारको सिलसिलामा अमेरिकामा छन् ।स्ववियू सभापति भए लगत्तै आन्दोलन र सक्रिय राजतन्त्र विरुद्ध म्याग्दीमा भएका विरोधका कार्यक्रममा सक्रियतापुर्वक सहभागिता जनाएका सिके राजनीतिमा सक्रिय नभएपनि हाल अमेरिकामा रहेको म्याग्देलीको साझा संस्थामा आवद्ध रहेका काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै २०६५ सालमा सभापतिमा विजय भएका भिम बहादुर क्षेत्री समेत अहिले राजनीतिमा सक्रिय छै्रनन् । बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा यूरोप पुगेका क्षेत्रीले जिल्लामा माओवादीको दवदवा रहे्को अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वको प्यानललाई नै भारी मतले विजय गराएका थिए । क्याम्पसको ९ औं सभापतिका लागि बुधबार मतदान हुदैछ । बुधबार म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसले नयाँ स्ववियू सभापति पाउने छ ।
२०५३ सालमा म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस बेनीमा सम्पन्न स्ववियु चुनाबमा बिजयी
Previous articleम्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियूमा मेरो आवश्यकता छ: सावित्री खत्री
Next articleसम्राट सापकोटा भन्छन्, ’मलाई भोट,रिचार्ड कार्ड र पैसा बाँड्नेलाई चोट’